Godina Gujii keessatti Qeerroon Bilisummaa waraqaa waamichaa facaasaa jira. « QEERROO
Godina Gujii keessatti Qeerroon Bilisummaa waraqaa waamichaa facaasaa jira.
September 20, 2016 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
Fulbaana 20,2016 Qeerroon Bilisummaa godina Guji Bahaattii aanaa Gooroo magaala Harqalloo keessatti waraqaa dhaadannoo fi qabsoon Oromoo fuuula duratti akka tarkaanfatuuf sochii uummatichaa kan jabeessu of kessaa qabu bottimfamee jira.
Waraqaaleen heddumminaan facaan fuula lama qabu kunis asiin hiine jirra. Uummanni Oromoo yeroo kanas waan isa baasu hubatee diinaa fi hidhataa kan diinaa kan qaban akkasumas investeroota Wayyaanee qabeenyaa isaanii Oromiyaa keesaa jiru irratti tarkaanfii fudhatuu fi lagannaaf of qopheessuun waamicha garagaraa waliif gochaa jiraachun yeroo kana haalaan kan hubatamee jiruudha. haatahu malee diinni sochii abbaa qabsoo oromoo wayita kanaa Qeerroo Bilisummaatti kan nahee fi sodaa keessatti kufee jiruun tarkaanfiin diinni uummata keenyarratti aggaamee jiru gara laafina malee gocha suukkanneessaa fudhataa jiraatuun gabaasonni garagaraa ibsu.
Qeerroon Oromiyaa keessatti wayita kana FXG kan jabeessu kutannoodhaan galmaan gahuuf itti cicheetu jira. kanumaanis waamicha FXG fiixaan bahiinsa itti gochuuf waraqaan Qeerroo magaalotaa fi baadiyaalee Oromiyaa keessatti faca’aa jira.
Inni biraan torbanoota kana keessa leenjiin barsiisotaa kennamaa jiraatuun akkuma beekame har’a kutaa magaalaa Finfinnee garagaraatti leenjiin
kennamaa jiru gaaffiiwwan hedduun hammatamee fi biddoo garagaratti waltajjiin wayyaaneen iyyaa jirtuuf bakka dhabuudhaan kaan achuma keessa taahuudhan toora interneetaa fayadama kaan ammoo ni rafa yeroo shaayee bunnaa fi kkf hundas lagachuudhaan walgahiin wayyaanee fesheletaa jira.
Barsiisonni akka oromiyaatti walgahii irra jiranis diddaa isaanii bifa garagaraan itti fufanii jiraachuun har’a buufata walgahii isaanii garagaraa
irraa odeessaan caasaan qabnu nuuf himaa jiran.
« Haxxummaa fi Malaamaltummaa Mootota Habashaa
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Qophii Fulbaana 20,2016 »
Ashaam, Ashaam,Ashaam, Duraa dursee qeerroo oromootiifii ABO ykn WBO oromoo gallatoofachuun baribadaa akkasuum ummataa oromoo hundaa gallannii kessaan bilisumma hatahuu..qeerroo oromo kaneen wargammteefii wargammaa jirtuu seenaa bara bara haa yadatuu. haayyoonii kenyaas baga jirataan horraa bullaa ..gallanii kessaan bilisumma hatahuu.Dhugaan dhokkoochuuf sobaa hin tatuu.kanafuu yaa oromo tenyaa FXG gollabaa itti hagonuu ,dhugaa qabnaa, haqqaa qabnaa , nii ijjiifaan gadaan gadaa bilisummatii…horraa bullaa..